ဘယ်လိုဆိုအဆင်ပြေမလဲမသိန်းကြည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » ဘယ်လိုဆိုအဆင်ပြေမလဲမသိန်းကြည်
Posted by jullies cezer on Dec 5, 2012 in Think Different | 29 comments
ဦးဦးပါလေရာရဲ့ သာဓုခေါ်ရမှာလားတရားစွဲရမှာလားမသိန်းကြည် ရဲ့နောက်ဆက်တွဲလေးပါ ။ ပထမတော့ comment ရေးမလို့ပဲ
comment က နဲနဲများတော့ Post တစ်ပုဒ်စာလောက်ဖြစ်သွားလို့ပါ ။
တိုက်ခန်းနေတဲ့ဒုက္ခတွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ပြောမဆုံးပေါင်တောသုံးတောင်ပါပဲ ။ အစကထင်ထားမိတာက အထပ်မြင့်ရင်
ရေပြသနာနဲ့ အခြားခြားသောပြဿနာတွေ များမယ်လို့ထင်ထားမိခဲ့တယ် ။ ဒါပေမဲ့တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ အောက်ထပ်လဲ
အောက်ထပ်အလျောက်ပြဿနာတွေရှိတာပဲ ။ ကြုံဖူးတာကိုပြောပြမယ် cezer ရဲ့အလုပ်ရှင် သူဌေးမက၁၂၄ လမ်းမြေညီထပ်မှာအထည်ဆိုင်ဖွင့်ပါတယ် ။ မိလ္လာပိုက်လဲပေါက်ရော ပြင်ဖို့ရာ ပိုက်ဆံလိုက်ကောက်တယ်တစ်တိုက်လုံး အိမ်ဌားမို့လို့ လက်လုပ်လက်စားမို့လို့ ဘယ်သူမှမထည့်ကြဘူး မိလ္လာဖတ်တွေကလဲ အောက်ထပ်ပဲစုပုံကျတာကို ပြီးတော့ အပေါ်ထပ်ကပစ်ချသမျှ အမှိုက်တွေကလည်း နောက်ဖေးမြောင်းထဲမှာစုံပုံပြီးမြောင်းပိတ်လို့
မပြစ်ချပါနဲ့လို့ ဘယ်လိုမှ ညှိုနှိုင်းလို့မရ နောက်ဆုံး မိလ္လာကန်လဲပြည့်ပိုက်ကလဲပေါက် အဆုံးသတ်မှာမခံနိုင်တဲ့သူကပဲအားလုံးအိတ်စိုက်ပြီး
ပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတယ် ။ ဒါကကြုံဖူးတာတစ်ခု ။
နောက်တစ်ခုကျ cezer တို့ရုံးကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အစ်မ တစ်ကိုယ်တည်းအပျိုကြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ်နားအေးပါးအေးသမား တစ်ယောက်ထဲဆိုတော့
ချက်ပြုတ်လဲ မစားဖြစ်တာကများတယ် ။ တိုက်ခန်းဝယ်တော့ ၅လွှာမှာ အောက်ထပ်မှာထမင်းဆိုင် အပျိုကြီးဆိုတော့ အေးဆေးပဲချက်မစားချင်လဲ ၀ယ်စားရုံပဲ အဆင်ပြေလိုက်တာပေါ့အဲဒါနဲ့ဝယ်လိုက်တယ် ။ တကယ်တမ်းကျအထင်နဲ့အမြင်က တက်တက်စင်အောင်လွဲတာပဲဗျို့ ။ မနက်တိုင်း ထမင်းဆိုင်ကဟင်းချက်တဲ့ညှော်နံ့တွေနေ့တိုင်းခံရတယ် ။ ညှော်တွေဝပြီးစားချင်သောက်ချင်တဲ့စိတ်တွေလဲပျောက်ကုန်တယ်။ ထမင်းဆိုင်ဆိုတော့အလုပ်သမားကများ နေ့တိုင်းအလုပ်သမားတွေဆူဆဲအောက်ငေါက်တာတွေနေ့ဓဒူဝကြားရတယ်။ ရေတင်ရင်လည်း
အောက်ထပ်ကအခန်းတွေပြည့်မှအပေါ်ကိုတက်တယ်။ ကိုယ်ကတင်ချင်ပြန်လဲ အောက်ထပ်က ကန်မှာရေပြည့်မှတင်လို့ရတယ် ။
အဲလိုနဲ့ပဲ အကြောင်းကြောင်းသော စိတ်ပျက်ခြင်းများကြောင့်အစ်မလဲ တိုက်ခန်းကိုရတဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းပြီး နားအေးမယ်ထင်တဲ့အရပ်ကိုပြောင်းရွေ့ခဲ့ရပါကြောင်း။
နောက်တစ်ခုက cezer တို့ တိုက် ဘယ်အခန်းကမှန်းမသိ ငရုတ်သီးထောင်းတယ် ငရုတ်ဆုံကိုအ၀တ်အခံပဲနဲ တဒုန်းဒုန်းနဲ့ အသံကဆူတော့မခံနိုင်တဲ့သူကလူဝင်လူထွက်များတဲ့cezerအခန်းကိုလာပြီးကတ်ကတ်လန်အောင်ရန်တွေ့ပါလေရော မနက်မိုးလင်းခဏနဲ့ ညအလုပ်ပြန်ချိန်ပဲရှိတဲ့အိမ်ကိုလူဝင်လူထွက်များတာလေးနဲ့ မစုံစမ်းပဲလာစွပ်စွဲတယ်ခံပြင်းစရာကောင်းလိုက်တာ ။ အဲဒါနဲ့အိမ်ကလူတွေကလဲ မခံပြန်ပြောစကားများရ ။
နောက်ဆုံး ငရုတ်သီးထောင်းသံထပ်ကြားအောင်စောင့်ပြီး ထောင်းတဲ့အချိန်မှာ ခုနက ကတ်ကတ်လန်အောင်လာရန်တွေ့တဲ့ဟာတွေကိုတွေ့လားငါတို့မဟုတ်ဘူးဟေ့ဆိုပြီး ငရုတ်သီးကိုအသံမြည်အောင်ထောင်းတဲ့အခန်းကိုရှာပြီးသက်သေပြမှရန်ပွဲရပ်တော့တယ်။ ပြီးရင်ရှိသေးတယ်သူများခေါင်းလောင်းကြိုးကို အားမနာလျှာမကြိုးခြေထပ်နဲ့ညှပ်ဆော့ပြီးဖုန်းပြောတယ်။ တချိန်လုံးခေါင်းလောင်းကမြည်နေတော့လူလာတယ်မှတ်ပြီးအပြင်ထွက်ကြည့် လူမတွေ့တော့ဒေါသတွေဖြစ်ရ အကုသိုလ်တွေများရနဲ့ တိုက်ခန်းနေရတာဘာများကောင်းတာကျန်သေးလဲရွာသူရွာသားအပေါင်းတို့
၁။ ဦးပါရဲ့ post ထဲမှာပါတဲ့ “ဒီလမ်းမှာ ခိုတွေကျီးတွေဘယ်လောက်များသလဲ၊ ခွေးလေခွေးလွင့် ခွေးချေးပုံတွေ ရှောင်လို့ရောလွတ်ပါ့မလားလို့ စဉ်းစားသင့်တာတစ်ချက်’’
၂။ အောက်ထပ်မှာထမင်းဆိုင်ရှိလား စားသောက်ဆိုင်ရှိလား ကြည့်ရမှာတစ်ချက်
ကျန်တာများရှိရင် ရွာသူရွာသားများထပ်ဖြည့်စွက်ပေးကြပါလို့ ပြောကြားရင်း
နိဂျုန်းခုပ် အဲလေ နိဂုံးချုပ်
ဂျူးလိယက်လေး ခင်တာထက် ဦးကြောင် ပိုခြစ်ပြမယ်…။
အထက်က တနင်္ဂနွေသား ပြေားထားတဲ့
ကဗျာလေးအတိုင်းပဲ သင့်တော်မယ်ထင်ပါတယ် . . . .
အဲဒီလို ဆိုရင်တော့ မောင်ပေ့ အတွက် အဆင်မပြေဘူး ဂျူ ရယ်
ဝိုင်ဝိုင်း ရဲ့အေးစက်စက်ဆောင်းညတွေမှာ ကို မဆိုပါရစေနဲ့ 
၀မ်းနည်းရမှာလား ၀မ်းသာရမှာလားမိသိန်းကြည်။ :harr:
ဆီဆာလေး.. အဲ့လောက် ကိတ်စများမြောင်နေဒဲ့ တိုက်ခန်းတွေမှာ
မနေနေနဲ့ဒေါ့.. အူးလေးတို့ ဘောဘောပေါ်လာခဲ့
နားအေပါအေးပေါ့… ပင်လယ်လေးလေး တဖြူးဖြူးနဲ့
ဆီဆာရေ – အမကတော့ အောက်ထပ်က ထမင်းဆိုင်ကို အမြဲရှောင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမလည်း ၀ယ်ပြီးရော အမတို့ မြေညီထပ်ကလူတွေက လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ဖွင့်တာနဲ့ အမြဲကြုံရပြန်ပါရော။။။
အဲဒီတော့ ရွေးဖို့ကတော့ မလွယ်ရေးချ မလွယ်ပါ။ ဒါကြောင့်ခုတော့ တာဝတိသာမှာပဲ တက်နေတော့တယ်နော်။
ဦးမာဃဆီလဲ ဧည့်စာရင်း တိုင်တာမတွေ့ပါလား
အင်းးးးးးးးးးးးးးးးရှောင်တခင် စစ်ဆေးချက်တွေ လုပ်ဦးမှ ထင်တယ်
စစ်ဆေးတွေ့ရှိက ကြီးလေးသောအပြစ်ဒဏ် ခံရပါမည်
ဒါဆို အစ်မ winner က တာဝတိသာမှ ဦးမာဃ နဲ့ တစ်ရပ်ကွက်ထဲပေါ့
ကိုရင်စည်သူရယ် ပင်လယ်လေလေး တဖြူးဖြူးခံစားချင်ပါသော်ငြားလဲ
တိုက်တန်းနစ်ဆိုတော့ တိုက်တာနဲ့တန်းနစ်မှာမဖြစ်သေးဘူးဗျို့ …..
ပိုစ့်နဲ့ မဆိုင်တာ ၀င်ပြောလိုက်အုံးမယ်။
နိုဝင်ဘာအတွက် ဖတ်ကူပေးမယ်ပြောထားလို့ ..
အဲဒါလေး ရရင် BestWebAwards@myanmargazette.net ကို ပို့ပေးစေချင်ပါတယ်။
ပုံမှန်ဆိုရင် ရွေးချယ်တဲ့စာမူစာရင်းကို ၅ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး ပို့ရတာမို့ လိပ်စာမှားနေမှာစိုးလို့။
တဆက်တည်း ဦးမာဃကိုလည်း ရွေးချယ်တဲ့စာမူစာရင်းပို့ဖို့ ပြောချင်ပါတယ်။
၃ ရက်နေ့က ပို့တယ်ဗျ မရောက်တာ
ဘယ်က ဖောက်တာလဲတော့ မသိဘူး
အစ်မ4ရက်နေ့ထဲက ပို့လိုက်ပြီလေအစ်မ မေး address က
julliescezer12 ကနေပို့လိုက်တာ …….
ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေပါဘူး မသိန်းကြည်
အဆင်ပြေသလို နေလိုက်ပါ မသိန်းကြည်
မဆလခေတ်မှာ .. မသိန်းရှင်
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လေးဆယ်ကျော်က စံရွှေမြင့်ကာတွန်းကို ဒီခေတ် ဘယ်သိတော့မှာလဲ သူကြီးရဲ့
( လူပျိုကြီးဖြစ်မယ့်အတူတူတော့..ပြောလိုက်ပါတော့မယ်လေ.. )
” လူဝင် လူထွက်များတဲ့ cezer အခန်းကို ”
အစိုးရက ဘာတခုမှ (ဘာတခုမှ..- တကယ့်ကို ဘာတခုမှ) စီစဉ်မထားဘူး
ဘာတွေစီစဉ်ရမှာလဲဆိုတော့ -နေထိုင်မှု့စည်းကမ်းဥပဒေ၊ သုံးစွဲမှု့စည်းကမ်းဥပဒေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု့စည်းကမ်းဥပဒေ တွေပေါ့…
စင်္ကာပူမှာ မြေမရှိလို့ အားလုံးနီးပါး စုပေါင်းတိုက်ခန်းတွေမှာပဲ နေကြရတယ်
-နေထိုင်မှု့စည်းကမ်းဥပဒေ၊ သုံးစွဲမှု့စည်းကမ်းဥပဒေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု့စည်းကမ်းဥပဒေတွေ ပြဌာန်းထားတယ်
အသေအခြာ စိစစ် အရေးယူတယ်
အစိုးရဆိုတာ အစိုးရဖြစ်လာပြီးရင် ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့
မြင်မြင်သမျှ လက်ညှိုးထိုးရောင်းစား အိပ်ထဲထည့်ရမှာ မဟုတ်ဘူး
ကိုယ်အုပ်ချုပ်ရတဲ့နေရာမှာ လိုအပ်ချက်တွေကို ရှာဖွေဖြည့်ဆည်းရမှာ….
အဲဒါ အရင်အစိုးရ/အစိုးရ၀န်ထမ်း အုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိတွေတော့ ထားပါတော့
သူတို့ထဲက အစိုးရဆိုတာ တရားဝင်ဓါးပြတိုက်ခွင့်ရှိသူလို့ ထင်သူက ထင်ကြသေး….
ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ့်ပြည်သူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ အခက်အခဲတွေကို လေ့လာဖြေရှင်းသင့်ကြောင်း..
အရည်အချင်းကြောင့် အစိုးရဖြစ်လာတာမဟုတ်လို့ ဘာမှမလုပ်တတ်ရင်လဲ
အဘဖောက လဲ သူများတကာ စာမရေးတတ်ပါဘူးဆိုမှ ငိုချင်လာပြီနော်
မနေ့ကဖတ်ပြီး ကွန်ကမြေကြီးနားကဘဲသွားနေတာ တက်ကိုမလာလို့ ဒီနေ့မှမန့်ရတာဗျာ။
အင်း ရန်ကုန်မှာတိုက်ခန်းဝယ်နေဖို့ကလည်း တွေးစရာ မေးစရာတွေ အတော်များတာပါဘဲနော်။
ကျန်တာတွေထက် ထမင်းဆိုင် စားသောက်ဆိုင်နီးလို့ ညှော်နံတွေအများဆုံးရတာတော့ သိပ်မနိပ်ဖူးဗျ။
တစ်ခါတလေ ကိုယ့်မှ ညှော်ရှောင်သင့်တဲ့ မကျန်းမာမှု့မျိုးဆိုရင် ဘယ်လိုများနေရမလဲလို့တွေးမိတယ်။
ဂျူးလိယက်နဲ့ဦးကြောင် တဦးအပေါ်တဦး နားလည်မှုရှိနေပြီမို့ မကြာခင် အာဝါဟဝိဝါဟ လုပ်တော့မည်ဖြစ်ပါ၍ မိတ်ဆွေများ ၁၀%ဒစ်စကောင့်ဖြင့် ကြိုတင်လက်ဖွဲ့ထားနိုင်ပါဂျောင်း…။ ထရေးဒါးဟိုတယ် အပေါ်ဆုံး တာဝါတိုင်တွင် မင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပရန်ရှိ၍ ဧည့်သည်အရေအတွက်အား ဦးရာလူစနစ်ဖြင့် ကန့်သတ်ဖိတ်ကြားပါမည်။ :harr:
တာဝတိံသာမှာ ခန်းမလာငှားတာတော့ မဟုတ်ဘူး
အိုး ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ပါဦးကြောင် စိတ်လျော့ စိတ်လျော့ ဦးကြောင်ကသူကြီးသမက်လေ
လူကြီးမင်းထက်အဖြစ်ဆိုးမဲ့အဖြစ်တွေ မဖန်တီးချင်ပါနဲ့ ဦးကြောင်ရယ်
ဂျူးလိယက်လဲ သူကြီးအားတို့ကြောက်သည် ခွိခွိ
ဂလို အေ့ ဂလို